पिलाउनै पर्ने प्रचलन « Jana Aastha News Online
| Mon May 23 2022
पिलाउनै पर्ने प्रचलन
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७३, बिहीबार १४:३५
चलन पनि कस्तो ! भारतीय सेनासप्रमुख समकक्षीको निम्तोमा नेपाल आउँदा राष्ट्रपतिले मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने ! बर्दीसहित तरबार पनि हस्तान्तरण गर्ने ! अनि, त्यही बेला खुशीयाली प्रकट गर्दै उपाधि पाउनेले हात पछाडिबाट दुई पेग रक्सी दिएर बाजा बजाउन लगाउने !
समारोह चलिरहेको छ । सेनाको ब्याण्ड टोलीले मंगलधुन बजाउँछ । टोलीका दुईजना अगाडि बढ्ने, पाहुनाका अगाडि एउटा घुँडा टेक्ने र तिनलाई हात पछाडिबाट लगेर दुई पेग रक्सी पाहुनाले दिने । पानी, सोडा, आइस केही नहालेको रक्सी तन्तनी पिएर फेरि बाजा बजाउन थाल्ने । भारतीय चारतारे जर्नेल विपिन रावत गत साता काठमाडौं आउँदा शीतल निवासमा यस्तै भयो ।
विश्वभरको सैन्य सेवा बरियताका मामिलामा जतिसुकै कडा मानिए पनि भारतमा कहिलेकाँही मर्यादाक्रम यताउता हुने कुराका साक्षी पनि हुन्, रावत । उनी वरियताक्रममा तेस्रो नम्बरका हुन् । मोदी सरकारले उनलाई सैनिक प्रमुख बनाएको हो । आजादीपछिको भारतीय इतिहासमा यस्तो काम तेस्रोपटक भएको छ ।
शीतल निवासमा गत साता भएको यस्तो दृष्य विदेशतिर हाम्रा प्रधान सेनापतिहरु जाँदा पनि देखिन्छ । विशेषतः बेलायत र भारत जाँदा यस्तो हुने गरेको छ । यसलाई ‘पाइपर’ बजाउने भनिन्छ । बेलायती राज्य स्कटल्याण्डको मौलिक धुन हो जो सैनिक परम्परासँग जोडिँदै आएको छ ।
धुलिखेलका मेयर बालकोटमा,गोकुल बाँस्कोटा धुलिखेलमा
अखिल पनि हदम्याद खारेजको पक्षमा
चट्याङ लागेर २ जना बिते, ३ जना घाइते
लुम्बिनीको सफलतामा को दङ्ग,कसको मन भरङ्ग ?
भोटेबहालको बिजुली पसलमा आगलागी
काठमाडौं महानगरमा नयाँ उल्झन,उपप्रमुखका उम्मेदवारले हाले पुनर्गणनाको निवेदन
निर्वाचन सकिएको ४० घण्टामा शपथग्रहण
मनोज पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखन कसुरमा जाहेरी
चीनमा झण्डै लोप भएको लङगुरको बथान देखिन थाल्यो
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिताले ?